China GMP Veterinary Probiotics Medicine Bdellovbrio Plus Anti-Diarrhea And Ehance-Immunity Oral Liquid For Swine စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများ |Weierli
ဖွဲ့စည်းမှု-အလားအလာရှိသော ဘက်တီးရီးယားများ (bdellovibrio bacteriovorus၊ clostridium butyricum)≥6.0×107cfu
● Bdellovibrio Plus အား အီးကဲ့သို့ ရောဂါပိုးဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သော ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများအတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။coli၊ salmonella၊ vibrio cholerae၊ haemophilus စသည်တို့ အထူးသဖြင့် ဝက်ကလေးဝမ်းလျှောရောဂါအတွက်။၎င်းသည် ဗိုင်းရပ်စ်ဝမ်းလျှောခြင်းကို သိသာထင်ရှားစွာ ကာကွယ်နိုင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ဝက်ကလေးများကို သုံးရက်ဆက်တိုက် အသုံးပြုပြီးနောက် ဝက်ကလေးများသည် သိသိသာသာ သပ်ရပ်မှုနှင့်အတူ ကြီးထွားနှုန်းမြန်လာသည်ကို တွေ့နိုင်သည်၊ ဝက်ကလေးများ၏ ဝမ်းပျက်ခြင်း အမျိုးအစားအားလုံး သိသာထင်ရှားစွာ လျော့နည်းသွားသည်၊ ဝက်ကလေးများ၏ ဝမ်းလျှောခြင်းကို ဤထုတ်ကုန်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ကုသပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ဝက်ကလေးများဝမ်းလျှောခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားရသည့် သေဆုံးမှုပြဿနာကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချပေးနိုင်သည်မှာ ထင်ရှားသည်။
● ၎င်းသည် အူလမ်းကြောင်းအတွင်း ရောဂါပိုးဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယားများ၏ မျိုးပွားမှုကို ဟန့်တားနိုင်ပြီး အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ မိုက်ခရိုဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ ဟန်ချက်ညီမှုကို ထိန်းညှိပေးပြီး မျိုးစေ့များ၏ ကိုယ်ဝန်နှောင်းပိုင်းတွင် ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို တားဆီးပေးနိုင်သည်။အသုံးပြုပြီးနောက် မျိုးစေ့များကို စားသုံးပြီးနောက် မျိုးစေ့များကို အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းအတွင်း အကျိုးပြုပန်းမန်များ တိုးပွားလာစေပြီး သားဖွားပြီးနောက် အစာကျွေးခြင်း၊ စုပ်ယူနိုင်မှု အားနည်းခြင်းနှင့် မီးဖွားပြီးနောက် ချို့တဲ့ခြင်းတို့ကို တားဆီးပေးသည်။မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် မျိုးစေ့နို့အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၏ အခန်းကဏ္ဍလည်း ပါဝင်သည်။
1. ဝက်ကလေးများအတွက်- နို့စို့ပြီးနောက် ဝက်ကလေးတစ်ကောင်ကို 2ml ပေးသည်။
2. ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ဖိအားများသော ဝက်များအတွက် မွေးရက်တွင် 2ml ကို သုံးရက်ဆက်တိုက် ပေးသည်။
3. feed နှင့် ရောစပ်ခြင်း- Bdellovibrio Plus ၏ 0.5-1% ကို ဖြည့်စွက်စာ သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားသော အစာတွင် ဖြန်းပါ။
◊ သင်ကြားရေးအဆင့်တွင် ဝက်ကလေး၏ အစာကျွေးနှုန်းမှာ 0.5% ဖြစ်သည်။
◊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကုသရန်အတွက် မျိုးစေ့တစ်စေ့ကို တစ်နေ့လျှင် 20ml ရောစပ်ကျွေးပါ။
◊ ပျိုးဝက်များအတွက်- Bdellovibrio Plus 20 ml ကို ရေ 20L ဖြင့် ပျိုးပြီးသည်အထိ ထည့်ပါ။
◊ ဆူစေသောဝက်များအတွက်- ဤထုတ်ကုန်၏ 20 ml ကို ရေ 40L တွင် တစ်လလျှင်7ရက်ကြာထည့်ပါ။
1. ဝက်ကလေး ဘက်တီးရီးယား ဝမ်းလျှောခြင်း အတွက်- မွေးကင်းစ ခုနစ်ရက်အလို ဝက်ကလေး တစ်ကောင်လျှင် 2ml၊ ခုနစ်ရက်ကြာပြီးနောက် ဝက်ကလေး တစ်ကောင်လျှင် 4ml၊ လူ၏ ဆေးဝါးကုသမှုဖြင့် ၃-၅ ရက်အထိ ဆက်တိုက် အသုံးပြုနိုင်သည်။Bdellovibrio Plus ၏ 20ml ကို ရေ 10L ရောစပ်ပြီး 5-7 ရက်အထိ ဆက်တိုက်အသုံးပြုပါ။
2. မျိုးစေ့အတွက်- မမွေးဖွားမီ3ရက်အလိုတွင်၊ သောက်ရေ 4-6ml သို့မဟုတ် Bdellovibrio Plus ရောစပ်ပြီး နေ့စဉ်သုံးပါ။သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်မဆောင်မီ ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် အစာမစားခြင်း (တစ်နေ့လျှင်0ကြိမ်) မမွေးဖွားမီ 15 ရက်အလိုတွင် မျိုးစေ့တစ်ခုစီအတွက် Bdellovibrio Plus 20ml ကို အသုံးပြုပါ။
500ml/ 500L သောက်ရေ၊ 5-7 ရက်။
ယခင်- အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် လက်ကားစျေးနှုန်း တရုတ် ထိပ်တန်း အရည်အသွေး ဝါးနိုင်သော ကယ်လ်ဆီယမ် တက်ဘလက်
နောက်တစ်ခု: စနစ်ကျသော ကူးစက်ရောဂါများအတွက် တရုတ် တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ပဋိဇီဝဆေး Doxycycline နှင့် Colistin ဆေး
တရုတ် Probiotics ဆေး
CE Certificate China ထုတ်လုပ်သူ 20% Purity CA...
စက်ရုံမှ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး တရုတ်အားဖြည့်အချိုရည် Taur...
တရုတ် 60ml 75% Alcohol Hand San...
OEM/ODM တရုတ် တရုတ်တိရစ္ဆာန်ဆေးကု Fenbend...
ခေတ်စားနေသော ကုန်ပစ္စည်းများ China Multivitamin Injection...